Kulamada Premier League oo dib loo dhigay… (Goormee la qorsheeyay in dib loo ciyaaro?) – Gool FM
Kooxda PSG oo u safartay dalka Portugal ka hor kulankooda Champions League & Xiddig muhiim ah oo aan u ciyaari doonin kulanka habeen dambe
Kooxda Tottenham oo tijaabada caafimaad loo maray… (Booskee ka ciyaaraa xiddiga ku soo biiraya?)
Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Arsenal
Kaddib go’aankii Borussia Dortmund tababare Solskjær oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan heshiiska Jadon Sancho
Kaddib Hakim Ziyech, Chelsea oo ku dhow inay la saxiixato xiddig kale ee ka tirsan kooxda Ajax
Ole Gunnar Solskjær oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii ay Man United u gudubtay wareega afarta ee tartanka Europa League
Kulamada CAAWA laga ciyaarayo tartanka Europa League & saacada la baasanayo
Kooxaha Inter Milan iyo Manchester United oo iska xaadiriyey afar dhammaadka Europa League
Shaxda rasmiga ah kulanka Europa League ee Kooxaha Manchester United iyo Koebenhavn oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka Europa League ee Kooxaha Inter Milan iyo Bayer Leverkusen oo la shaaciyay
Kulamada Premier League oo dib loo dhigay… (Goormee la qorsheeyay in dib loo ciyaaro?)
Dajiye March 13, 2020
(England) 13 Mar 2020. Xiriirka kubadda cagta ee horyaalka Premier League ayaa ku dhawaaqay maanta oo Jimco ah in dib loo dhigay kulamada horyaalka ilaa iyo Isbuuca ugu horreeya bisha soo socota ee April, sababa la xiriira cudurka Coronavirus.
Cudurka Coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay horyaalka Premier League, kaddib markii uu ku dhacay macalinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta iyo weeraryahanka Chelsea ee Callum Hudson-Odoi, isla markaana kooxo dhowr ah la karantiilay.
Haddaba waxaa si rasmi ah dib u dhac ugu yimid riyadii kooxda Liverpool ee hanshada horyaalka Premier League, labada toddobaad ee soo aadan, waxaana dib loo dhigay ilaa iyo 3-da bisha April ee soo socota.
Sidoo kale wuxuu hakat ku yimid marka laga yimaado horyaalka Premier League tartamada kale ee gudaha England ee FA Cup iyo Carabao Cup.
UEFA oo go’aan rasmi ah ka soo saartay tartamada Champions League iyo Europa League
Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka isbuuca ee Champions League oo la shaaciyay… (Ma Oblak mise Ilicic?)